Challenge The Good News Paper - Murwere we pfungwa anowana chirevo muupenyu (Shona)
Murwere we pfungwa anowana chirevo muupenyu (Shona)
Murume we ku Zambia anonzi Chisha Evaristo akanwa zvinodhaka zvakanyanya zvokuti pfungwa dzake dzakanga dzatenderera zvokuti pfungwa dzake dzakanga dzatenderera zvokuti pfungwa dzake dzakanga dzatenderera zvokusvika pakupenga, izvi zvakaitika mugore ra 1995.
Akanga achizhanduka zvokuti akanga otosungwa ne ngetami idzo dzakasiya Ava ne mavanga mumaoko ne mu zvitsitsinho zvemakumbo ake.
Parizvinho murume uya aitaura zvisina maturo pamwe nekushandisa zvinodhaka, ava muzvina bhizimisi ava ne pfungwa dzaka gadzana uye anoda Jesu. Akatotaurawo nebepa nhau rino apo paakanga ari pagungano nama kristo ku South Africa.
Chisha anoti 'Handichanwe doro kana ku bhema fodya, handichina nhunha yazvo, ndakaponeswa handichamuki pakati pe husiku ndichitsvaka zvino dhaka.
Mwari vakandibatsira zvikuru kuti ndikunde zvivi zvangu, uyezve nemharidzo dzandakanzwa kubva kubva kuva paridza vanondiparidza pauzima pamwe neku burikidza nema pepa nhau ne zvi vhitivhiti.
Mushure me kushandisa zvinodhaka kwemakore mashanu, hupenyu hwa Chishanu hwakashanduka apo akazvioner ega kuti hupenyu hwake hwakanga waparara uyezve paakanzwa nemurume waashanda naye nezve tariro iri muna Jesu.
Akarangarira kutenda kwaaive nako achiri mudiki pamwewo ne dzidziso dzaaisinzwa pa dzimudzangara.Norubatsiro rwe shamwari yake iyi, Chisha akateurira ku kuregererwa zvivi zvake uye nekudzikinurwa kune zvakaipa pamwe nokuva noupenyu husingaperi mumakritso
Chisha anoti 'Ndodawo kuva ne hupenyu hune chirewo'.
Parizvinho Mwari vakamubatsira kupupura kuna avo vaakarevera nhema pamwe nokuumba hukama hwakanaka nevamwe.
Chisha anokuridzira vamwe achiti vanhu vanoupenyu hwakakamisika sewe hwangu vanofanirwa kuzvipairira kuna Jesu, iye anogona kugadzirisa zvose. Anoda kuti vauye kwaari, ane rudo uye ane hunyoro. Nokuti Mwari akada nyika nokudaro wakatipa mwanakomana wake mumwe chete kuti anina ano tenda kwaari arege kufa ave nehupenyu husingaperi 'Johan 3.16 .•
<< Isimo senqondo sithole incazelo (Zulu)
Portia’s change of heart >>